Super EQ S1, famakafakana, fahombiazana ary vidiny | Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | 02/09/2021 12:00 | hevitra
Miverina izahay miaraka amin'ny fanadihadiana momba ny headset Bluetooth tsy misy tariby. Fa amin'ity indray mitoraka ity izahay dia manome maodely anao miaraka amina endrika "mihoatra ny sofina", na inona no mitovy, headphone manarona tanteraka ny sofina, ny Super EQ S1. Headphone headphones miaraka amin'ny habe mety ho an'izay te hiroboka tanteraka amin'ny mozika iza no mihaino.
Avy amin'ny tanan'ny OneOdio, orinasa iray izay efa afaka namakafaka ireo fitaovana isan-karazany mifandraika amin'ny feo. Ary ahoana ity karazana vokatra Super EQ izay ahitanay ity maodely izay holazainay aminao ny zava-drehetra. Ohatra tena mazava iray tokony hananana fitaovana tsara kalitao miaraka amin'ny fampisehoana tsara tsy ilaina intsony ny mandany be.
1 Super EQ S1, mihoatra ny nandrasana
3 Famolavolana ny Super EQ S1
4 Super EQ S1 endri-javatra
Super EQ S1, mihoatra ny nandrasana
Ny famakafakana ny lohan-tsofina Super EQ S1 isaky ny teboka dia afaka jerentsika fa tena marina tokoa izay lazaintsika fa manana vokatra tsara. Tsy misy isalasalana, ny zavatra voalohany miavaka dia ny azy endrika ivelanyary famolavolana tena nahatratra tsara. Teboka roa izay manome ny vokatra a sary "premium" tsy misy fialonana amin'ny avo indrindra.
Saingy tsy ny lafiny ara-batana ihany no teboka mampiavaka ny Super EQ S1. Ny teknolojia ampiasana azy, ary koa ny fampisehoana afaka manolotra ny mpampiasa izany ataovy iray amin'ireo safidy mahaliana indrindra amin'izao fotoana izao. Indrindra raha jerentsika ny elanelam-bidin'izy ireo mihetsika. Afaka mahazo ny anao izao ianao Super EQ S1 amin'ny vidiny tsara indrindra amin'ny tranonkala ofisialy.
Tonga ny fotoana hijerena ny atin'ny boaty an'ny headphone Super EQ S1. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nanao unboxing roa sosona izahay hatramin'ny nahazoantsika singa roa an'ny headphones amin'ny loko roa misy. Manana isika ny headphones, tonga izany mivalona ary tsy maintsy esorintsika mba hahafahantsika mametraka azy ireo amin'ny toerana "mahazatra".
Izahay koa manana tariby roa, samy manan-danja. ny tariby fametrahana bateria, miaraka amin'ny Endrika USB Micro. Ary a 3.5mm jack tariby hahafahana mampifandray ny headphones amin'ny fitaovana misy amin'ity seranana ity raha lany ny bateria. Izahay koa manana antsipiriany avy amin'ny mpanamboatra amin'ny endrika kitapo mitondra padded ary mora misokatra.
Raha tsy izany dia manana tsotra fotsiny ilay boaty Super EQ S1 firaketana ny vokatra mahazatra, fohy torolàlana momba ny fampiasana sy ireo taratasy mifandraika amin'ny Warranty.
Famolavolana ny Super EQ S1
Amin'ny vokatra hita maso toy ny headset, izay manana habe be koa, lasa fototra ny famolavolana. Gadget ho hitan'ny rehetra rehefa ampiasaintsika eny ivelany izy ireo dia tsy maintsy manintona, farafaharatsiny ho an'ireo izay mividy azy. Nahita headphones efa be loatra amin'ny sofina amin'ny endrika, habe ary loko isan-karazany isika ary azontsika lazaina izany ny Super EQ S1 dia mijanona amin'ny toerana malina.
ny Super EQ S1 amin'ny vidiny tsara indrindra amin'ny tranokala ofisialin'ny OneOdio
Hitantsika famolavolana izay tsy ankafizin'ny olona dia manintona ny maso. Tsara vintana isika manana sy mizaha toetra ireo loko roa misy; mainty sy fotsy. Ary eo amin'izy ireo, ankoatry ny loko lehibe dia manana lafiny sy endrika mampiavaka azy ireo izy ireo.
Ny headphones fotsy Manana loko mitovy amin'ny volon-koditra manarona ny foam sy ny fehy amin'ny loha izy ireo. SAINGY ny ampahany boribory izay mitoetra eo ivelan'ny headphone dia vita amin'ny volafotsy. Na izany aza, headphone mainty mihazona ny loko mitovy amin'ny vatana ivelany. Amin'ny tranga roa, ny ao anaty fehikibo Vita amin'ny a loko mena mampiavaka azy mpanamboatra.
Nahita iray izahay fehiloha azo lava ka azo ampiasaina na dia amin'ny loha lehibe aza.
Amin'ny sofina havanana encontramos bokotra ara-batana fanompoana ho azy izany fanaraha-maso playback mozika. Ary azontsika atao koa ny mampiasa azy ireo hamaliana na handavana ny antso an-tariby. amin'ny earphone ankavia dia ny port famandrihana, miaraka amina endrika Micro USB. Ireto koa ny microphone sy port mini jack 3,5 mampifandray analog audio tariby.
Pad amin'ny headphone koa mendrika hotononina manokana. Namboarina tamin'ny efoam malefaka izay mifanaraka tsara amin'ny anatomia antsika. Miverina endrika eo noho eo ihany izy ireo. Ary tonga nofonosina izy ireo ara-nofo "Poly-hoditra" kalitao avo. Ary noho ny seams hita maso dia manome endrika "ambony" tokoa izy ireo.
Super EQ S1 endri-javatra
Fotoana izao hilazana aminao ny zavatra rehetra angonin'ny Super EQ S1 ho antsika. Ary tsy maintsy manomboka amin'ny firesahana ny fanafoanana ny tabataba mavitrika. Iray amin'ireo endri-javatra be mpitady indrindra amin'ny maodelim-peo amin'ny fotoana rehetra. Ny Super EQ S1 dia fitaovana miaraka amina microphone bi-directional manokana efatra ho an'ny fiainana manafoana ny tabataba mahatalanjona ny hatramin'ny 33 desibela.
Ankoatry ny fanafoanana ny tabataba mavitrika toy izany dia asongadin'izy ireo ihany koa ny fomba mangarahara. Miresaka amin'ny fomba mpanelanelana izahay ho fanampin'ny fihainoana ny mozikanao tanteraka miaraka amin'ny habetsahana voafantina, afaka mihaino izay manodidina antsika tsy misy fahasarotana isika. Mety raha te hitandrina isika raha sanatria miresaka amintsika any amin'ny birao izy ireo, na rehefa mandalo faritra be fivezivezena isika, sns. Raha toa ka ireto no notadiavinao, dia azonao ny Super EQ S1 ny vidiny tsara indrindra.
Vaovao iray manan-danja isaky ny miresaka momba ny fitaovana "mandeha" isika ny fizakan-tena fa afaka manolotra ny vokatra. Amin'ny tranga headphones Super EQ S1 dia miresaka momba ny mety hampiasaina tsy tapaka ny 45 ora. Raha tsy misy fisalasalana, isa mihoatra ny ampy hanadino tanteraka ny enta-mavesanao mandritra ny faran'ny herinandro ohatra.
Tsy ny headphone rehetra amin'ity habeny ity no manana ny mety ho aforitra. Ny Super EQ S1 dia azo aforitra avy amin'ny kaopy sofina tsirairay mba hahazoana dian-tongotra kely kokoa. Lavorary ny fametrahana azy ireo ao anaty kitapo fitaterana izay hitantsika ao anaty boaty ary izy ireo dia ao anatin'ny valizy lehibe indrindra. Inona koa, ny spaonjy mameno pads dia mampiasa azy tsy manelingelina na manindry miaraka amin'ny ergonomics izay mandika amin'ny traikefa tena ahazoan'ny mpampiasa.
Tsy afaka manadino momba izany isika fifandraisana miaraka amin'ireo S1 an'ny Super EQ avy amin'ny OneOdio ireo. Manana fifandraisana isika Bluetooth 5.0, zavatra manome antoka antsika famantarana tsy misy fanelingelenana. Saingy manana ny azo atao ny mampifandray sy mampifandray ny headphones antsika miaraka amin'ny fitaovana roa tsy mitovy. Zavatra iray izay amin'ny fampiharana dia tena ahazoana aina.
Super EQ avy amin'i OneOdio
endrika Over sofina
Conectividad Bluetooth 5.0 hatramin'ny fitaovana 2 miaraka
sehatra 1o metatra
fizakantena Ora 45
Ny fanafoanana feo Hybrid miaraka amin'ny fihenan'ny 33 dB
Ary mbola hanohon SI
lafiny X X 17 15 14 sm
lanja 300 h
vidiny 51.95 €
Rohy mividy Super EQ S1
Mahita feo manara-penitra isika noho bass be ary fanafoanana ny tabataba.
El famolavolana ary ny fitaovana ambony noho ny elanelam-bidiny.
Manisa miakatra 45 ora fampiasana teboka miampy lehibe izy ireo.
Super Bass sy ANC
Headphones fotsy toa mora maloto.
Ny tariby mametaka amin'ny Endrika USB Micro toa daty.
Navoaka tamin'ny: 2 Septambra amin'ny 2021
Fanovana farany: 2 Septambra amin'ny 2021
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Super EQ S1, famakafakana, fahombiazana ary vidiny
Ahoana ny fomba hamafana ireo hafatra ao amin'ny kaontinao ao amin'ny Messenger